Warbixin:- Sidee ayay ushaqeeyaan maleeshiyaadka macamuusluyeeda ee la dagaalama Ururka Alshabaab? - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaWarbixin:- Sidee ayay ushaqeeyaan maleeshiyaadka macamuusluyeeda ee la dagaalama Ururka Alshabaab?
Warbixin:- Sidee ayay ushaqeeyaan maleeshiyaadka macamuusluyeeda ee la dagaalama Ururka Alshabaab?
September 21, 2019 marqaan Wararka Maanta 0
Iyada oo ay dowladda Feederaalka ee Soomaaliya iyo Ciidamada Midowga Afrika ka socda ee AMISOM ay muddo dheer dagaal kula jiraan ururka Alshabaab ayaa haddana waxaa muddooyinkii dambe soo ifbaxayey maleeshiyaad Soomaali ah oo deegaanadooda ka billaabaay dagaal ka dhan ah Alshabaab.
” ilaaiyo hadda dhawr mar oo ay na soo weerareen oo aan iska caabbinnay iyo deegaanki annaga aan iska aasaasnay oo ay ka fogaadeen, xoolihi ay naga qaadi jireen iyo dadki la gowrici jiray oo loo soo dhici jiray oo aan ka badbaadnay, wax badan baa noo nabad galay” ayuu sii raaciyey Cali Cabdullaahi Diiriye.
Degdeg:- Puntland oo kahadashay dadkii ay shaqaalaysiisay ee laga soo eryay Hargaysa.